Yini i-OAuth futhi kungani ibalulekile? | Kusuka kuLinux
Oauth yindinganiso evulekile ekhishwe ngasekupheleni kuka-2007 echaza indlela yokusebenza ukuze uhlelo lwewebhu (iklayenti) likwazi ukufinyelela kulwazi lomsebenzisi komunye (umhlinzeki) ngaphandle kokwazisa igama lokuqala lomsebenzisi nephasiwedi.
Ake sicabange ukuthi sifuna ukuhlela uhlelo lohlobo lwe "ikhasi lasekhaya lomsebenzisi", lapho umsebenzisi angangeza khona izithombe zakhe kuFlickr. Kulokhu sizosebenzisa iFlickr API, sizocela umsebenzisi igama lomsebenzisi nephasiwedi futhi sizosetha lelo khasi. Kukulezi zinhlobo zezimo lapho Oauth kunengqondo, ukuxhumana phakathi kwezinhlelo zokusebenza zewebhu lapho kutholakala khona idatha yomsebenzisi. Umqondo ngukuthi isicelo seklayenti (kulesi sibonelo ikhasi lethu lasekhaya) alinakho ukufinyelela egameni lomsebenzisi nephasiwedi yomsebenzisi. Ngamanye amazwi, I-Oauth iyindlela yokuhlonza ngama-API ejwayelekile nokusetshenziswa kwamahhala. Uma ukhathele ngezinsizakalo umsebenzisi we-Gmail noma i-Hotmail akucela zona ukukunikeza lokhu noma lokho kusebenza, usuvele ubona lapho kusiza khona umthetho olandelwayo onjenge Oauth.
Vele sekuvele kunamazinga amaningi avaliwe enza lokhu, ngokwesibonelo iGoogle AuthSub noma iFlickr neFacebook APIs, kepha umqondo ongemuva Oauth ukuhlanganisa ngezinga elivuliwe ukuze lolu hlobo lokuxhumana phakathi kwezinhlelo zokusebenza zewebhu (kahle, iklayenti lingaba iwebhu noma ideskithophu) alikhulunywa ngezivumelwano zokuphathelene.
Umuntu ucabanga ngokushesha I-OpenId, kodwa Oauth Akususi esikhundleni saleli zinga lokuhlonza umsebenzisi, kepha kunalokho kuyaligcwalisa. Eqinisweni, abasebenzisi abaze "babone" noma yini ehlobene Oauth, etholakala ezingeni lokuxhumana phakathi kwezinhlelo zokusebenza. Eqinisweni, iningi lomusa we Oauth ngukuthi umsebenzisi ulawula ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni ezifinyelela. Ukuqhubeka nesibonelo seFlickr, kungasungulwa ukuthi hlobo luni lwezithombe yebo nokuthi yini engaveli kwinsizakalo yomhlinzeki futhi amaklayenti angatholanga lutho olunye.
Njengeqiniso elithandekayo, ngemuva Oauth kukhona iPownce, Twitter, SixApart, Jaiku, Flickr, Ma.gnolia neGoogle, phakathi kwezinye.
Imininingwane eminingi ku indawo yakho esemthethweni, onakho blog.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Yini i-OAuth futhi kungani ibalulekile?
Luis Alberto kusho
Ulwazi oluhle kakhulu. Siyabonga ngokusinikeza umbono ojwayelekile wokuthi kuyini. Maduze ngizosebenzisa i-OAuth kuhlelo lwami lwe-Android. Ngiyabonga